5 alina amin'ny Freddy lalao - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
5 alina amin'ny Freddie
Kto fisainana tia lalao, satria loza, ho faly amin'ny fahafahana hilalao lalao an-tserasera ho an'ny 5 alina amin'ny Freddie ho maimaim-poana. Miaraka amin 'ny hafa animatronics: akoho Chikoy, Foxy amboahaolo izany, bitro Bonnie, Freddie Bear mihaza Mike Schmidt ny vaovao mpiambina alina pizzeria. Mampatahotra saribakoly tena te-hanao izany ampahany tamin 'ny rahalahiny, na dia na dia teo aza ny zava-misy fa Mike dia olona velona. Ho bebe kokoa lalao-andian-dahatsoratra, ary isaky ny miseho horohoro ny horohoro. Mitandrema fa ny sela sy ny efi-trano afa-herinaratra, satria raha mivoaka, Freddy ho avy eo aminao ny melodious feo ny lullaby hira.
Lalao 5 alina miaraka amin'i Freddie tamin'ny Category:
Ny tsara indrindra 5 alina amin'ny Freddie
Dimy alina amin'ny Freddie
Dimy Freddy 2 alina
Dimy alina amin'ny Freddie 3
Dimy alina amin'ny Freddy ny: Animatronic Jumpscare Factory
5 alina avy Freddie: Toy Chick - fanaovana mofomamy kely!
5 alina avy Freddie: Factory fahariana
5 alina avy Freddie: Strong fitifirana
Dimy alina amin'ny Freddy ny: mpanao hatsikana Alina
5 alina avy Freddie: 5 alina ny fitiavana - Fampidirana
5 alina avy Freddie: Noana fako
Dimy Any Amin'ny Freddy's: Ultimate
Andron'i dimy ao amin'ny fihemorana farany an'i Freddy
Andron'ny dimy any amin'ny tontolo Freddy
Kogama dimy alina ao amin'ny Multiplayer an'i Freddy
Efatra dimy ao amin'ny toerana misy ny rahavavy Freddy
Fito alina amin'ny Burger King
Dimy alina amin'ny Freddy ny: Alina iray amin'ny Flumpty ny 2
Dimy alina amin'ny Freddy ny: dimy Alina amin'ny Candy ny
Dimy alina amin'ny Freddy ny: Freddy ny Fitiavan'Andriamanitra Calculator
Freddy ny Escape House
Dimy alina amin'ny Freddy ny: dimy Alina Mega amin'ny Parking
Tianao ve ny hiaina ny fahatsapana ny tahotra, dia ny lalao dia hanampy amin'ny fizarana izany
Lalao Online Rehetra 5 alina amin'ny Freddy lalao
Zhutkie tantaran'ny lalao 5 alina Freddi
Redko popping lalao izay afaka tena manao nidaboka. Indraindray lehibe hevitra tsy miaina ho amin'ny fanantenana, fa ny"perla"ny virtoaly toerana teraka mihitsy aza. Tamin'ny 2014, Coughton programa Scott no namorona tsy manam-paharoa ao amin'ny lalao nafana ny tafavoaka velona fomba mahatsiravina (ho tafavoaka velona ny nofy ratsy). Games 5 alina amin'ny Freddie dia azo maimaim-poana sy ny indie lalao, izay ny fampandrosoana sy ny fandefasana ny vokatra tsara mitoetra eo tsorony ny developer na tarika madinika.
Toy efa preliminarily nandinika sy nekena ho an'ny fampielezana teo, ary ankehitriny dia azo nilalao tamin'ny finday, takelaka sy ny solosaina.
Rehefa mifanentana ny horohoro ao misy foana malefaka izay mitombo tsikelikely, milaza fa loza lurks manodidina isaky ny zorony, amin'ny isan-mitete aloka.
Syuzhetnaya manoritra milalao protsessa
Mayk Schmidt farany, nahita asa ho toy ny alina mpiambina tao amin'ny fisotroana kafe sy ny pizzeria. Tsy misy miavaka, fa ela dia fantatro fa ity toerana ity dia zava-doza sy saro-pantarina. Ianao no milalao 5 alina izy ho any milalao miaraka Freddie amin'ny anarany, miaro ny fomba rehetra ny andrim-panjakana sy ny niafina avy amin'ny animatronics. Mike manomboka mahazo avy amin'ny mpiasa teo aloha ny feo fampitandremana azy mba ho tena malina. Taloha nanompo animatronics mpitsidika, fa indray andro iray lehibe nahatonga lohany ratra ny zaza, ary ity raharaha ity dia"fanindronanao 87"fehezan-dalàna. Ankehitriny, dia voarara tsy hiseho ny tolakandro, na izany aza, raha lava ny andro itehirizana animatronics kilemaina, ny servo aelin'ny no voasakana, ka dia navela hirenireny manerana ny efitrano mandritra ny alina.
Byvshy mpiambina Nampitandrina momba ny loza mitatao ny nahita ny hafa, ny milina manapa-kevitra fa mbola tsy vita endoskeleton izay kilalao, ka miezaka ny manamboatra azy, rehefa nanosika mba hifanaraka ny hoditry ny Freddy Bear. Mazava ho azy, fa ny olona dia ho hahafaty fitsapana tahaka ny any feno ny karazan'olona rehetra ny vy.
Ny iray amin'ireo fakan-tsary mampiseho ny taratasy ao amin'ny gazety, izay vavolombelona milaza fa ny lehilahy, mitafy ny fitoriana ny Golden Freddy nahafaty dimy ny ankizy, ary mbola mitaraina fa mijery ny animatronics ahiahy amin'ny fehim voaloto amin'ny rà sy mahatahotra fofona.
Mba ho velona, ​​dia tsy maintsy hanao Mike amin'ny 12 ka hatramin'ny 6 maraina sy ny amin'ny tena-ny mety hatao ao 8-10 minitra. Ny tena toetra amam-panahy dia tsy afaka mihetsika ny alalan 'ny faritra, sy manara-maso ny toe-javatra ny fonosina toerana amin'ny alalan'ny lahatsary fakan-tsary. Indraindray dia Nalefany ny fahazavana mba hahazoana antoka fa tsy misy ny tsy animatronic manakaiky izany. Vatoaratra amin'ny fetra, sy ny heriny dia tokony ho lany kely. Raha Nihazakazaka avy, ny mazava mivoaka, ary ny fitaovana tsy miasa. Tamin'izany fotoana izany, anisan'izany ny standby hery, sy ny miaraka amin'ny mozika lullaby dia ho Freddie, ary rehefa tapitra ny hira, dia mivoaka sy jiro, dia mitondra hanafika Mike, namono azy.
milalao ny mahazatra rehetra kilalao sy hankafy ny tahotra. Tsirairay ampahany amin'ny toerana mampivelatra ary mampiditra endri-tsoratra vaovao. Ny voalohany nanomboka nivoaka, fa ny bera gameplay Freddy 2 mitaky mifantoka, tsy mba malahelo ny mpamono olona sy manara-maso ny fakan-tsary. Ankoatra izany bebe kokoa, ary rehefa tonga ny anjara ny vaovao fanadinana, ny lalao Bear 5 Freddy tsy stinted ny zava-miafina, fandrika sy loza.
Bonni bitro feoletovogo loko manga amin'ny gitara sy mena lolo,
Chika mavo akoho amin'ny Bib milaza hoe"Andeha isika hihinana! ",
Foksi mena amboahaolo amin'ny fehin-kibo ny masony sy ny hook fa tsy ny tongotra,
Freddi amin'ny mikrô,
Zolotoy Freddie mavo orsa, izay hita eo amin'ny efijery.
Walk ny Tapaka ny 5 alina amin'ny Freddie, raha be herim-po toy izany!